Nihetsiketsika ny polisy Stockholm noho ny fikomiana mpikomy mpifindra monina Silamo nandritra ny amboaran'ny Davis
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Nihetsiketsika ny polisy Stockholm noho ny fikomiana mpikomy mpifindra monina Silamo nandritra ny amboaran'ny Davis
Stockholm Natambatra eraky ny tanàna ny polisy, izay hampiantrano ny ho avy Amboara Davis lalao nifanaovan'i Suède sy Israel, hisorohana ny korontana mety hanoherana ny Israeliana sy ny firongatry ny mpifindra monina silamo sy ny 'mpitsoa-ponenana'.
Ny fihaonana tamin'ny amboara Davis dia tokony natao tao amin'ny tanàna kelin'i Bastad, fa nafindra tany Stockholm noho ny antony ara-piarovana. Nilaza ny tompon'andraikitra tenisy soedoà fa tsy afaka miantoka fiarovana ho an'ireo mpilalao sy mpankafy israeliana izy ireo amin'ny toerana malalaka any Bastad.
Nafindra tany amin'ny Royal Tennis Hall ao Stockholm, araka izany, ny lalao.
Tonga 10 taona katroka taorian'ny fifandonana mahery vaika tao Malmo ny fifindran-toerana, rehefa jiolahim-boto silamo an-jatony notohanan'ny hoodlum an'ny elatra ankavia no nameno ny arabe mba 'hitaky' ny fanafoanana ny lalao Cup Davis hamelezana an'i Israel.
Tamin'izany fotoana izany dia nisy korontana mahery vaika nanenika ny tanàna, izay manana 'fiarahamonina' mpifindra monina Silamo lehibe. Ireo hoodlum silamo dia nifandona tamin'ny polisy, nitora-bato sy nanapoaka fiara.
Hifanandrina amin'i Israel i Sweden amin'ny sokajy Davis-Africa Group I hamatorana an'i Israel amin'ity faran'ny herinandro ity, ka ny mpandresy amin'ny lalao no mamandrika toerana amin'ny Tompondakan'i Davis Cup 2020.
Norombahin'i Suède ny amboara Davis fito teo anelanelan'ny 1975-1998 ary izy no laharana fahadimy amin'ny lisitry ny tompon-daka rehetra.
Ny Wonder Train dia hitaterana mpizahatany 4 tapitrisa any Alpes
2026 Lalao Olaimpika amin'ny ririnina: Ciao Italia